Horumarinta Uur-jiifka ee Columbus, OH | Caafimaadka PW
Horumarinta Uur-jiifka ee Columbus, OH
Qaybtani waxay sharraxaysaa horumarka ilmahaaga iyo sidoo kale isbeddelada aad ku dhacdo markii uurkaagu sii socdo. Waxaan kaala hadlaynaa arrimo badan ballamadaada caadiga ah. Fadlan si xor ah u weydiiso adeeg bixiyaha wixii su'aalo kale ah oo aad qabtid.
Halkaa markay marayso, embriyaha ayaa ka yar rubuc inji. Qaybaha ugu horreeya ee jirka ee ilmaha oo aakhirka noqda maskaxda iyo lafdhabarta. Wadnaha, wareegga dhiigga, iyo habka dheef-shiidka ayaa qaabeeya. Waqtigaan, waxaad tabaysaa caadadii kuugu horeysay. Naasahaagu way jilcayaan wayna waynaanayaan. Daalka daba dheeraada iyo kaadida oo soo noqnoqota ayaa laga yaabaa inay bilaabato, oo ay sii socoto seddex bilood ama ka badan.
Horumarka embriyaha waa deg deg. Wadnaha ilmuhu wuxuu bilaabaa inuu soo shubo dhiigga iyo xubnaha addinku si wanaagsan ayey u horumarsan yihiin. Astaamaha wajiga iyo qeybaha waaweyn ee maskaxda ayaa la kala garan karaa. Dhagaha ilmaha ayaa ka soo baxa maqaarka isku laalaabma; lafo iyo muruqyo yaryar ayaa ka samaysma maqaarka khafiifka ah hoostiisa. Waqtigaan, embriyaha ayaa koray ilaa ku dhowaad laba inji oo dherer ah. Cudurka subaxda ayaa laga yaabaa inuu sii jiro 12 toddobaad, ilmagaleenkaaguna wuxuu isu beddelaa pear una beddelaa qaabka adduunka. Waxaa laga yaabaa inaad dareento inuu kordhayo dheecaanka siilka. Badanaa, ma jiraan wax miisaan ah oo kordha.
Waxay kuxirantahay goorta aad bilawday daryeelkayaga uurka, waxaan kaala hadli doonaa macluumaadka borotiinka uurjiifka ah (AFP) inta u dhaxeysa toddobaadyada 11-14.
Embriyaha ayaa noqonaya uurjiif Qalbigiisa garaacaya ayaa lagu garan karaa Doppler. Ilmuhu wuxuu qaataa qaab ka sii bini aadam ah sida jidhka hoose u soo baxo. Xubnaha waxay bilaabaan inay kala duwanaadaan, kilyaha waxay bilaabaan inay soo saaraan kaadi. Muuqaalkiisa iyo addimmadiisa wejigiisa iyo addimmadiisa ayaa aad u kala duwanaan kara, waxaana la sameeyaa faraha, suulasha, dhegaha, iyo baalasha indhaha.
Culayska uurjiifku waa qiyaastii hal ounce dhererkiisuna waa saddex inji. Ilmo-galeenkaagu wuxuu ka sarreeyaa cirifka miskaha.
Haddii aad doorato in lagaa qaado baaritaanka dhiigga ee AFP si meesha looga saaro cilladaha dhalashada ee ku lug leh maskaxda iyo xudunta laf-dhabarka, waxaa la sameeyaa waqti kasta oo u dhexeeya 16 iyo 18 toddobaad. Tijaabadani waa ikhtiyaari, waxaanan kaala hadlaynaa faa'iidooyinka iyo khasaaraha.
Nidaamka muruqyada ilmuhu waa qaan gaadheen, oo habdhiskiisa neerfaha ayaa bilaabaa inuu xakameeyo. Xididdada dhiigga ayaa si dhakhso leh u kobca. Gacmaha uurjiifka ee ilmaha ayaa wax qabsan kara lugahana si firfircoon ayey u laadayaan. Xubnaha waxay bilaabaan inay bislaadaan oo koraan. Halkaa markay marayso, uurjiifku culeyskiisu waa qiyaastii toddobo ounces oo dhererkeeduna yahay lix inji. Sanduuqa (dusha sare ee ilmo-galeenka) wuxuu u dhexeeyaa bartamaha iyo xuddunta. Waxaad heleysaa qiyaastii hal rodol asbuucii, waxaana laga yaabaa inaad bilowdid inaad dareento firfircoonaan badan. Waxaad ogaan kartaa kororka dheecaanka hoosta haweenka waxaana laga yaabaa inaad bilowdo xirashada dharka hooyada. Cadaadiska kaadiheysta hooyada ayaa yaraata, xaddiga kaadi ahaaneedna wuu yaraadaa. Waxaad dareemeysaa dhaqdhaqaaqyo uurjiif ah (soo deg deg) laga bilaabo 16 ilaa 22 toddobaad oo uur ah.
Dhaqdhaqaaqa ilmaha ayaa ka xoog badan oo si fudud loo dareemayo. Ilmuhu wuxuu koray ilaa 10 inji oo dherer ah culeyskiisuna waa 1/2 rodol. Timaha wanaagsan waxay daboolayaan jirka. Baarkooda, baarkooda iyo timaha madaxa ayaa soo baxa. Uurjiifku wuxuu sameeyaa jadwal joogto ah oo ah hurdo, nuugid iyo haraati. Sanduuqa wuxuu gaarayaa dusha xuddunta. Naasahaaga waxaa laga yaabaa inay bilaabaan inay soo daayaan dambar.
Ultrasound waxaa badanaa la sameeyaa qiyaastii 20 toddobaad. Ultrasound-kan wuxuu caawiyaa qeexida anatomy-ka uurjiifka, booska mandheerta, iyo mugga dareeraha. Inta lagu guda jiro ballantaada qiyaastii toddobaadyada 20-24, waxaad helaysaa tilmaamo ku saabsan baaritaanka sonkorowga.
Maqaarka ilmaha ayaa u muuqda casaan oo duuduubmay. Qalfoofka ilmuhu si dhakhso leh ayuu u kobcayaa maaddaama unugyada sameeya lafaha ay kordhiyaan firfircoonaanta. Dhaqdhaqaaqa neefsashada ayaa bilaabmaya. Halkaa marka ay marayso, uurjiifka culeyskiisu waa ilaa hal rodol, 10 wiqiyadood. Sanduuqa ayaa ka sarreeya xuddunta. Waxaad bilaabi kartaa inaad yeelato dhabar xanuun iyo lugo xanuun, iyo sidoo kale isbeddelo maqaarkaaga ah iyo cuncun caloosha ah.
Uurjiifku wuu neefsan karaa, liqi karaa, oo hagaajin karaa heerkulka. Indhihiisa ama indhaheeda ayaa mararka qaar furmi kara muddo gaaban. Xilligan, ilmuhu waa 2/3 cabbirka dhalashadiisa. Sanduuqaaga dhexe wuxuu u dhexeeyaa xuddunta iyo lafta naaska. Jadwalka uur-ku-jirta ayaa noqon kara mid taabasho leh. Waalidiinta waxay bilaabayaan qaadashada casharada diyaarinta dhalmada waqtigaan.
Dhiig ayaa loo soo qaadaa baaritaanka sonkorowga inta lagu jiro booqashadaada xafiiska qiyaastii 28 toddobaad
Haddii aad tahay Rh diidmo, sidoo kale waxaa lagaa qaadayaa shaashadda antibody. Maanta sidoo kale waxaad heli doontaa cirbadeyntaada RhoGam.
Qiyaastii 28 usbuuc oo uur ah, booqashooyinka xafiiskaaga ayaa is beddelaya afartii toddobaadba mar illaa labadii toddobaadba mar.
Ilmuhu hadda gebi ahaanba wuu koray, dhaqdhaqaaqyaduna waa ku xoogan yihiin in banaanka laga arki karo. Maqaarka cunugu ma aha sidii laalaabkii, ilmuhuna badanaa wuxuu ku jiraa booska madaxa-hoose. Miisaanku waa qiyaastii afar rodol, dhererkiisuna waa qiyaastii 16 1/2 inji. Sanduuqa wuxuu gaarayaa salka lafta naaska, naasaha hooyadiisna way buuxaan oo jilicsan yihiin. Soo noqnoqodka kaadida ayaa soo laaban kara. Waxaa laga yaabaa inaad yeelato canqowga oo barara iyo dhibaatooyinka hurdada.
Waxaad sidoo kale heli doontaa foomkaaga horudhaca ah ee isbitaalka aad rabto inaad ku bixiso. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad booqato qaybaha shaqada iyo dhalmada inta lagu jiro waqtigan.
36 toddobaad uur, waxaad helaysaa tilmaamaha umusha kadib. Balamahaaga jadwalka ah ayaa isbeddelaya labadii usbuucba mar illaa toddobaad kasta. Waxaan ka wada hadalnaa arrimaha foosha iyo dhalmada, oo ay ku jiraan doorashadaada cisbitaalka, doorbidkaaga suuxdinta, iyo habraacyada aad foolanaysid foosha (goorta la wacayo, iwm.).
Ilmo-galeenka oo dhan waxaa habeeya cunugga, sidaas awgeedna dhaqdhaqaaqiisa oo aan yareyn. Unugyada difaaca jirka waxaa loo wareejinayaa ilmaha. Tani waxay siisaa difaac illaa lix bilood illaa iyo inta nidaamka difaaca ilmaha uu la wareegayo. Uur-kujirka ayaa si qoto dheer ugu dhaadhaca miskahaaga. Madheerta waxay kudhowaad afar jibbaar u egtahay sidii ay ahayd 20 todobaad kahor. Dhabar xanuun, soo noqnoqoshada kaadida, iyo foosha Braxton Hicks ayaa sii xoogeysanaya iyadoo afka ilmagaleenka iyo qeybta minka ee hoose ay isu diyaarinayaan foosha.
Baaritaanka xubinta taranka dumarka waxay bilaabaan inay qiimeeyaan kala-baxa, dheecaanka, iyo booska ilmaha.
Su'aalaha la iska weydiiyo korriinka uurjiifka
Goorma ayuu koriinka uurjiifku bilaabmaa?
Ukunta iyo shahwadu waa talaabadii ugu horaysay ee tillaabooyin taxane ah oo kakan oo keena uur. Marka bacrimintu dhacdo, ukunta bacrimisay waxay bilaabataa inay kala qaybiso oo ay koraan. Kooxda yar ee unugyadu waxay markaas sii maraan tuubada ugxan-sidaha ilaa ilmo-galeenka. Guud ahaan, ilmaha dhalan doona looma tixgalinayo uurjiif ilaa usbuuca sagaalaad kadib rimidda.
Sidee buu ilmo-galeenku isu beddeli doonaa xilliga uurka?
Xuubka ilmo-galeenka ayaa sii weynaada xilliga uurka si loo taageero ilmaha soo koraya. Muruqyadu waxay sidoo kale noqdaan kuwo dhumuc weyn oo xoog leh si ay u caawiyaan riixitaanka ilmaha inta lagu jiro foosha. Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa kaa caawin kara inaad fahamto sida ilmo-galeenkaagu isu beddelo xilliga koritaanka uurjiifka marka aad u soo gasho ballan hore.
Waa maxay qiyaasta taariikhdayda?
Qiyaasta taariikhda la filayo (EDD) waa xisaab xisaabin ku xisaabtamaysa maalinta ugu horreysa ee caadadaada ugu dambeysa iyo celceliska dhererka wareegga caadada ee haweeneyda. EDD daruuri maaha in la dhagax dhigo, laakiin waxay ku caawin kartaa go'aaminta qaybo ka mid ah daryeelkaaga dhalmada ka hor. Kooxdayada Columbus, OH, waxay ku siin karaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taariikhdaada gaarka ah.
Markaad gaarto 32 toddobaad ee uurkaaga, xusuus-qor maalinle ah oo dhaqdhaqaaqa ilmahaaga ayaa ku siinaya macluumaad waxtar leh.